Ufuna ukuthola Vietnam? Ingabe ufuna ukuchitha i iholide ngiyilibale ngasolwandle kude impucuko? Ngesikhathi esifanayo ufuna ukuhlala ehhotela? Kulokhu, Nhum ấm Saigon kuyona 4 * (Phan Thiet) kungenzeka kuwe ukufinyelela umgomo wakho. Iqiniso ukuthi Ihhotela likuvumela izivakashi zayo, funda ku.
Kubhekwe ehhotela four-star itholakala a amamitha ambalwa kusuka ebhishi, uHamu Thuan Nam. Vele 10 imizuzu izivakashi ngifinyelele ezikhangayo zendawo - Ke Ga Lighthouse. Golf Club "Ocean Dunes" ngemizuzu engu-20. Eziluzungezile, ngokuvumelana izivakashi, akukho ingqalasizinda ekhethekile. Ukuze konke ukuzijabulisa udinga ukuya Mui Ne futhi Phan Thiet. Ihhotela ihlinzeka kabili-nsuku zonke khulula service Shuttle. Futhi, ungakwazi ngaso sonke isikhathi ukuya endaweni isithakazelo ezokuthutha zomphakathi (ibhasi) noma itekisi. abahambi abaningi bakhetha ukuqasha isithuthuthu. Kulokhu, uzokwazi ukuhambisa ngokukhululekile yonke omakhelwane. Ngaphezu kwalokho, uma uhlela ukuhamba okuningi ke ukuqashisa isikuta kuyokulahlekisela ishibhile kuka kanye namabhasi. Ngokuqondene ibanga kusuka esikhumulweni sezindiza, indlela yokuphuma kuthatha cishe amahora ayisishiyagalombili. Ngokusho abahambi, leli qiniso iyona ethile kuphela sina Saigon ấm Nhum kuyona 4 * (Phan Thiet). Nakuba izivakashi abafisa ukuchitha iholide okuphumuzayo kude umsindo omkhulu edolobheni, leli qiniso akuyona amahloni ikakhulukazi.
Ihhotela Okubukwe unamahlangothi isilinganiso. Ngakho, izindlu zalo 150 equkethe yokuhlala ukhululekile, wahlela umzimba omkhulu futhi Bungalows eziningana. Ihhotela has impela eningi endaweni yawo. Ngokusho iholidi baye lapha bakithi, yena muhle, oluhlaza, ehlanzekile esimisiwe kahle. Kule ndawo ungathatha ukungcebeleka ezimnandi zibabaza izimila tropical futhi ubukele izinhlanzi ezimibalabala ezihlala ichibi elihle.
Sasizigqokele aneliseke izivakashi namachibi ehhotela ezimbili. Futhi omunye wabo ugcwele amanzi olwandle. Eceleni pool ifakwe ithala Ilanga ukhululekile sun bed baphathe nezambulela. Ezinye izivakashi uthanda uphumule lapha, ngisho nangaphezu kokubhema ogwini. Nganoma yisiphi isikhathi sosuku ungakwazi zithokozise isiphuzo ngaleso bar ZOKUBHUKUDA.
Ngaphezu kwakho konke lokhu okungenhla, Saigon ấm Nhum kuyona 4 * (Vietnam) has yokudlela ayo ukukhonza cuisine Asian futhi zaseYurophu, abasebenza ubusuku reception iwashi, isitoreji umthwalo, ikamelo umhlangano, ilondolo, ukuvakasha edeskini, exchange, ubuhle salon, spa isikhungo, igumbi Billiard, ebaleni lokudlala zezingane.
bakithi futhi wazi ukuthi abasebenzi ehhotela akakhulumi ngesiRashiya. Ngaphezu kwalokho, ngesiNgisi nayo bawuqonda ngabambalwa. Kodwa lezo zinkinga ekuxhumaneni, njengoba umthetho, asivelanga.
Njengoba kushiwo, zonke ehhotela has amakamelo 150. Bonke babe design stylish, kukhona ivulekile, ihlanzekile futhi zikhululekile. Amakamelo okulala awabange lapha amelwa izigaba ejwayelekile, Deluxe kanye suite. Kukhona futhi Bungalows eziningana. Kungakhathaliseki uhlobo, igumbi ngalinye has cable TV, ifenisha ukhululekile, ucingo, umshini ongenisa umoya, isiqandisi, itiye isethi, lokugezela elineshawa futhi okugeza, kuvulandi noma ithala. Amafulethi bahlanza nsuku zonke. Futhi, izikhathi eziningana ngesonto zasemizini ubuyekeze amathawula kanye amashidi, futhi njengoba imali restock inhlanzeko yomuntu siqu.
Izindleko zokuphila emphakathini yokuhlala inikezwe kuhlanganisa ibhulakufesi kuphela. Ngokuvamile, ngokuvumelana izivakashi eziningi, indinganiso kakhulu amahhotela eVietnam. Ngakho, ekuseni ungase udle amaqanda okuthosiwe noma amaqanda ngiyocasha, ubhekeni, namasoseji, izithelo, imifino, izinto ezibhakiwe, kanye cuisine wendawo (baga isobho, ukudla kwasolwandle side izitsha). Ingabe izivakashi nethuba babe kwasemini kanye dinner e yokudlela ehhotela. Lungiselela lapha, ngokuvumelana abahambi, hhayi okubi, futhi amanani okungabizi. Inombolo abahambi uncamela udle cafe eceleni kwehhotela lethu. Uma ungene emzini, nawe ungadla kwelinye amathilomu, lapho kukhona abaningi. Njengoba kushiwo, bakithi, amanani cishe zonke izikhungo zitholakala kalula, futhi ulungiselele zonke okumnandi.
Amanani, imicabango yabantu lezihambi
Njengoba for izindleko zokuphila, zasebusuku eziyisikhombisa abantu ababili lapha kufanele ukhokhe kusukela ama-ruble ayizigidi 21 ekamelweni ejwayelekile, kusukela ama-ruble ayizigidi 24 Deluxe, ayizinkulungwane 27 ngokuba Deluxe, elise isakhiwo eduze ebhishi, ukusuka ruble ayizigidi 33 Bungalow ngayinye kusukela ama-ruble ayizigidi 49 ngoba suite. Ngokuvamile, ngokuvumelana abahambi, owahamba ngoba Saigon ấm Nhum kuyona 4 * kuzibuyekezo, izintengo indawo yokuhlala hhotela ngempela uhambisane esigabeni sayo, izinga lenkonzo nenduduzo. Ngokuphathelene isilinganiso ehhotela, leliphatselene neluhlolo izivakashi, kuba 3.8 amaphuzu aphume a kungenzeka ezinhlanu. Ukwahlulela ngokubukeka amazwana kwesokunxele bezwe lethu, lesi sibalo kungaba okuningi ephakeme uma ihhotela wawusegunjini asondele eduze kwezindawo ezazihlala ezinkulu. Kukho konke, akukho izimangalo ekhethekile ihhotela izivakashi ungakhonondi.
"Christy" ehhotela (eCrimea, isigodi Unokuthula): incazelo, indawo kanye nokubuyekeza
Kuyini wokwelapha isifo somdlavuza wesibeletho kwa-Israyeli?
Amajikijolo Sunberry: iresiphi for amalungiselelo okumnandi
Tattoos on the ephansi emuva - ubuhle ezifihliwe yowesifazane
Hard disk ukwahlukanisa ukuhlela idatha